Maraqa oo ka muuqda miiska Afurka waa muhim kaasi oo leh faa’ido caafimaad iyo nafaqo… – Hagaag.com
Maraqa oo ka muuqda miiska Afurka waa muhim kaasi oo leh faa’ido caafimaad iyo nafaqo…
Posted on 12 Maajo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Inkasta oo la isticmaalo maraqa waqti kasta oo sanadka ka mid ah, hadana in laga helo miiska afurka Ramadaanka waxay u leedahay dhadhan ka duwan oo khaas ah, gaar ahaan waxaa ku jira faa’ido caafimaad oo badan.
Marka lagu daro wuxuu maraqa soo celiyaa qeyb ka mid ah biyaha aan u baahan nahay waqtiga Ramadaanka, maraqa diiran wuxuu u diyaarinayaa caloosha cuntada kale ee afurka. Sidoo kale waxaa laga helaa macdanaha jirkeena uu u baahan yahay.
Si looga faa’iideysto maraqa, waa in maaddooyinka ku jira ay noqdaan kuwo waxtar leh, sida ku darida khudaar sida karootada, zucchini iyo basal waxay kordhiyaan qiimaha nafaqada.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in laga yareeyo dufanka subaga, si ay u yeelato dhadhan iyo faa’ido waxaa lagu talinayaa in maraqa laga yareeyo sidoo kale milixda halkeediina lagu bedelo dhirta ama xawaashka faa’idada leh.
Afurka ka hor xusuusnow in maraqku uu yahay qayb muhiim ah ee afurka. Tusaale ahaan, Lentils ama Cadaska ayaa waxaa ku jira borotiinno badan waayo waxaa laga diyaariyey dalag. Haddii aad rabto inaad miisaankaaga ilaaliso, waxaad ku xisaabtami kartaa maraqa ku badan biyaha sida maraqa khudrada.